Wayne Rooney Oo Looga Digay In Booskiisa Tartanka Euro 2012 Uu Halis Ku Jiro | WWW.DARARWEYNE.TK
Wayne Rooney Oo Looga Digay In Booskiisa Tartanka Euro 2012 Uu Halis Ku Jiro
Tababaraha xulka qaranka Ingariiska Fabio Capello ayaa shaaca ka qaaday inuu ka saari doono xulka ciyaaryahan Wayne Rooney marka ay ciyaar saaxiibtinimo kula ciyaarayaan garoonka Wembley xulka Spain bisha soo socota.
Weeraryahanka Manchester United ayaa ugu yaraan hal kulan ku maqnaan doona ganaax furitaan ciyaaraha Euro ee sannadka danbe ka dib markii uu casaan ku qaatay ciyaaryahan uu laaday kulankii ay Montenegro la ciyaareen jimcihii.
Xiriirka kubada cagta Ingariiska iyo Fabio Capello ayaa rajeynaya in ganaaxa uu noqdo kaliya hal kulan, madaama laga yaabo inuu ka bato iyadoo UEFA ayaa odoraseyso warbixintii uu ciyaarta ka soo gudbiyay garsoorihii ciyaarta.
Capello ayaa haatan diyaar u ah inuu bilaabo qorshaha koobka Euro ee sannadka danbe ka dhacaya Poland iyo Ukraine, isagoo raadinaya ciyaaryahan bedela Wayne Rooney inta uu ganaaxa ku maqan yahay.
Tababaraha Talyaaniga aaya sidoo kale ka digay in hadii ciyaaryahanka Rooney haatan bedelaya uu noqdo mid aad u fiican inuusan Rooney u balan qaadi karin boos joogta ah marka koobka uu bilowdo.
“Rooney ma ciyaari doono kulanka aan la leenahay Spain” ayuu yiri Capello sida aan ka soo xiganay BBC Sport.
“Waxaan doonayaa inaan tijaabiyo ciyaartoy cusub iyo qaab cusub, wax ka duwan wixii aan soo sameynay”
“Malaha waxa ay la micno tahay waxa uu caboonaan ku bilaaban doonaa ciyaaraha Euro ama ka hor ayaa laga yaaba inuu kulamada qaar bedel ku soo galo”
“Lakiin kuma bilaaban doono. Waxaan dooneynaa inaan diyaarino 11ka safan doona ciyaaraha Euro”
“Waxaan heystaa haatan weeraryahano aad u badan, weliba kuwa aad u fiican”
“Hadii kuwa kale ay fiicnaadaan iyaga ayaa ciyaari doona. Intii aan tababare soo ahaa waxaan kursiga keyda soo fariisiyay ciyaartoy fiican. Waxaan mar walba go’aansan jiray ciyaaryahanka ugu fiican xilligaas iyo xilli walba”
Tags: England, Fabio Capello, John Terry, Wayne ROoney
« Casharka 3-aad ee barashada luuqada HTMLKA
Cristiano Ronaldo: Dadka Jecel Kubada Cagta Ayaa Jecel Inay I Daawadaan Anigoo Ciyaaraya »